Akhriso:- MD Farmaajo oo shuruudo aan la fulin karin ku xidhay sii daynta Wasiir Janan. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaAkhriso:- MD Farmaajo oo shuruudo aan la fulin karin ku xidhay sii daynta Wasiir Janan.
September 9, 2019 marqaan Faalloyinka, Soomaliya, Wararka maanta 1
Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federalka ah ee Soomaaliya ay shuruudo siyaasadeed oo adag ku xirtay siidaynta wasiirka amniga Jubbaland Mudane Cabdirashiid Xasan Nuur (Janan).
Gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland Axmed Maxamuud Cumar, ayaa sheegay inay la kulmeen saraakiil iyo wasiiro ka socda dowladda Soomaaliya haseyeeshee ay siidaynta wasiir Janan ku xireen shuruudo siyaasadeed oo qalafsan.
Guddoomiye Axmed Maxamuud Cumar, ayaa intaasi ku sii daray in dhammaan shuruudaha la hordhigay ay yihiin kuwa lagu kala qaybinayo bulshada kunool deegaamada Jubbaland.
DEG DEG+DAAWO: Axmed Karaash oo ku dhawaaqay warkii ugu cuslaa.
Haddii Jaalle Janan loo haysto dad uu bilaash ku laayey oo lagu soo cadeeyey Diinteenu waxay leedahay ha lagu qaado cinqaabta ay leedahay qof dad laayey.Haddiise an waxba lagu hayn xaq buu u leeyahay Janan in haddeer ooda laga qaado oo waliba la xaal mariyo.
Tan kale waxaa haddeer soomaaliya jooga oo aad ugu badan niman soo layey dad aad u tiro badnaa.Kuwaas oo hadda xamar ka haya xilal sar-sare.Maxuu Janan uga duwan yahay kuwaas?Waxaa xamar ku dhex mushaaxa nin maalmo ku dilay dad lagu sheegay 800 oo qof oo u badnaa dad shacab ah.Kaas lama yiraahdo soo qabta waa dambiilee.Iskadaa in la soo qabtee waxaa loo dhiibay masuuliyad aad muhiim u ah.
Sharciga qabtay Janan maxuu kaas u arki waayey?